Biby mpikiky | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Biby mpikiky
Fanomezana tavoahangy: mitombo sy mikarakara
Ny Tomato "Novice" dia efa nametraka ny tenany ho fanandramana tsara sy fandaniana tsara, ary mitombo isan-taona ny lazany. Ao amin'ity lahatsoratra ity, hahita ny toetra sy ny famaritana ny voatabia "Novice" ianao ary hianatra ireo karazana fikarakarana azy ireo. Ny endri-javatra sy ny tombony amin'ny karazana Tomatoes "Novice" dia karazana zavamaniry iray.
Ahoana ny fomba hampiasana ny tebiteby amin'ny tananao
Ny fisian'ny totozy kely eo amin'ny lavarangana amin'ny efitrano faha-10 ao amin'ny kabinetra misy voankazo dia tranga iray, na dia tsy fahita firy, fa mbola azo atao aza. Mety ho hafa be ny antony mahatonga ny mosary ao amin'ny efitrano. Diniho amin'ny an-tsipiriany bebe kokoa. Nahoana ny totozy tonga mitsidika? Indraindray isika dia miteraka mosara hitsangatsangana, ary manadino ny fihazonana ny fahadiovam-pitondrantena sy ny filaminana ao an-toerana ary ny famelana ny sakafo any amin'ny toerana azo aleha.
Ahoana no hiatrehana voalavo amin'ny trano manokana
Ny endriky ny voalavo ao amin'ny trano manokana dia mitarika hatrany ny ady amin'ny faritra misy ny mponina any. Ny famoahana ireo mpihantona dia mipaka amin'ny haavon'ny haavon'ny haingo, mampihorakoraka, manaparitaka, manimba ny sakafo, ary ny tsy mampino sy mampidi-doza indrindra dia mitondra ny karazan'aretina 70 mahery. Tsy mora ny miatrika ny fanafihana voalavo - nandritra ny taonjato nifandimby teo amin'ny olombelona, ​​ny raty dia nanolo-tena tanteraka tamin'ny karazana fandrika rehetra, noho izany dia ilaina ankehitriny ny mampihatra ireo fomba maoderina sy mahomby indrindra ankehitriny.
Safidy lehibe ho an'ny mpamboly novokarina - karazana voatabia "Cosmonaut Volkov"
Cumin sy thyme - zavamaniry hafa na zavatra mitovy?
Ny tena harena sarobidy ho an'ny mpamboly dia ny Purple Early Grape
Ny pastôraly: inona avy no hita ao amin'ny fampitahana, inona no ilaina, ny fomba fisafidianana sy ny fintana, ny habetsaham-bola
Arbutus: mitombo sy mikarakara hazo amam-bozaka eo amin'ilay toerana
Famaritana sy toro-hevitra momba ny fiompiana Bellflower
Bordeaux tsara tarehy - Merlot voaloboka
Lyufa: fananana mahasoa, fampiasana lamba rongony voajanahary
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Biby mpikiky